Vovon-tsiranoka karbôntra Tianeptine hemisulfate (1224690-84-9) - Phcoker
Tianeptine Sulfate, antsoina koa hoe vovoka monisidratate hemisulfate Raw Tianeptine, dia …… ..
Drug Class Mpanelanelana sy simika tsara
Ny iray amin'ireo fomba fiasa voalohany ho an'ny monohidrano hemisulfate Tianeptine dia ny fampitomboana ny fandraisana serotonin (5-HT) ao amin'ny ati-doha sy amin'ny takelaka. Tsy toy ny ankamaroan'ny fitambaran'ny tricyclic, Tianeptine dia toa tsy mifandraika amin'ny fihenan'ny fahombiazan'ny kognita na ny fiasan'ny motera. Toa manana fiasa amin'ny rafitra glutamatergika izy, izay heverina fa mekanisma antidepressant vaovao.
Amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fandraisana serotonine, ny monohidrate hemisulfate Tianeptine dia manana rafitra mifanohitra amin'ny SSRI nentim-paharazana. Ny fandalinana vao haingana dia nandinika ny vokatry ny Tianeptine ao anatin'ny rafitry ny hipopotama neuroplasticity of depression, izay mety misy hetsika sasany. Ny fikarohana natao tato ho ato dia mampiseho ihany koa fa ny Tianeptine dia mety hifandray amin'ny receptor adenosine A1.
▪ Aretina ketraka
▪ Toetra fanoherana ny tebiteby sy antidepresy ary nootropic
▪ Fampisehoana kognitifa sy fanatsarana ny fahaizany mianatra
▪ Marary hozatra
Tianeptine hemisulfate monohidratate dosis dia mazàna 25 mg indray mandeha, na indroa isan'andro. Na dia manomboka amin'ny doka ambany aza dia tsara kokoa ny mametra azy io ho 2 na 3 andro isan-kerinandro miaraka amina 3 - 4 andro farafahakeliny.
Ny monohidrate hemisulfate Tianeptine dia misy endrika kapsily na vovoka. Ampirisihina ny manomboka amin'ny doka ambany ary hampiakarana amin'ny vola kely mandra-pahatongan'ny fatra marina. Ankoatr'izay, ny fatra kely kokoa dia mampihena ny fahafahan'ny fiankinan-doha, ny fisintomana mafy ary ny fandeferana.
Ny fatran'ny 50 - 75 mg dia afaka manentana. Ny fatra fialam-boly Tianeptine hemisulfate monohidratika> 100 mg dia mety hiteraka fahatsapana hafanam-po mahery fihenan'ny hebidrotika Tianeptine.
♦ Manatsara ny neuroplasticity ao anaty ati-doha ny hemisulfate Tianeptine ary mampihena ny fahaketrahana. Ny neuroplasticity dia ny fahaizan'ny ati-doha mampifanaraka sy miova rehefa mianatra; manampy amin'ny fahombiazan'ny kognita tsara kokoa sy ny fanatsarana ny fahaizany mianatra.
♦ Ny fandinihana ireo marary 90 miaraka amin'ny PTSD dia nampiseho vokatra tsara tamin'ny fampiasana monohidratate hemisulfate Tianeptine. Ny fikarohana dia naneho ihany koa fa amin'ny fitsaboana amin'ny sulfat tianeptine sy ny fihenan'ny aretina mikorontana. Tianeptine hemisulfate monohidratr'i nomena ny beantitra marary dia naneho ny fanatsarana ny fiasan'ny neurocognitive fitaintainanana sy ny fanatsarana ny toe-po.
♦ Ny fanadihadiana savaranonando an'ireo 68 marary miaraka amin'ny ADHD dia nanatsoaka hevitra fa nihatsara be ny isa maridrefy ary ny Tianeptine hemisulfate monohidrate dia mahasoa amin'ny fahafaha-misaina tsara kokoa sy mampihena ny fihetsika hyperactive.
♦ Ny aretidratika hemisulfate Tianeptine koa dia analgesika (fanafody fanaintainana) mahomby, na dia ho an'ireo olona mijaly amin'ny fanaintainana lava aza. Izy io dia fomba mahomby amin'ny fampihenana ireo soritr'aretina mifandraika amin'ny olana ara-pahasalamana ao amin'ny tsinay.
♦ Ny Ivon-toeram-pitsaboana ara-panandramana ao Caracas dia nanao fitsapana an-tsokosoko 52 herinandro ny ankizy voan'ny sohika. Ny marary nitantana monohidratate hemisulfate Tianeptine dia nampitombo ny fiasan'ny havokavoka.